RANDRIAMANDRANTO IHANTA : « FOTOANAN’NY FANDRAISANA ANDRAIKITRA ETO AMIN’NY FIRENENA IZAO » – MyDago.com aime Madagascar
RANDRIAMANDRANTO IHANTA : « FOTOANAN’NY FANDRAISANA ANDRAIKITRA ETO AMIN’NY FIRENENA IZAO »
N’inon’inona mitranga hoy ny ministry ny fiompiana Randriamandranto Ihanta teny amin’ny Magro Behoririka omaly dia tsy maintsy miverina ny filoha Ravalomanana Marc naongana tamin’izany. Tsy tapitra amin’ny fahatongavany ny ezaka ataontsika hoy izy fa miatrika fifidianana isika, toy ny solombavam-bahoaka, kaomina. Eo amin’io fifidianana io no asian-teny satria tsy maintsy mandray andraikitra isika raha tsy izany tsy ho maro an’isa eo amin’ny fitondrana. Ny hametraka maro an’isa eo akaikin’ny filoha Ravalomanana Marc hoy ny ministra Ihanta toy ny ben’ny tànana, depiote, chef de region no ataontsika. Nambarany ihany koa tokony ho sahy maneho hevitra ny vehivavy, miditra amin’ny fikambanana maneho hevitra hampandroso ny firenena. Ny vehivavy rahateo moa no nikarakara ny hetsika teny an-kianja ka maro izy ireo no tonga teny. Iza moa hoy ny ministra Ihanta no vehivavy tsy nametraka ny fony sy ny dian-tongony teo amin’ny firenena. Rehefa ny vehivavy ny mijoro dia mangovitra daholo ny rehetra. Raha ohatra hoyizy isika vehivavy sahy mijoro sy mihika indray andro hoe hanavotra ny firenena toy ny ao amin’ny parlemantera, izay ny antsamanila fotsiny dia mino ahy ianareo fa hisy fiovana ity firenena ity.Tsy hisy intsony ny tsy fanajana ny zon’olombelona, tsy hisy intsony ny fanitsakitsahana ny lalàm-panorenena..Ndao hoy ramatoa ministra hifanolotanana satria ny vehivavy no andrin’ny tokantrano. Misy fiteny izay hoyizy hoe raha misy lehilahy matanjaka manana ny maha izy azy diamisy vehivavy eo akaikiny eo. Ndeha ho avadintsika izay ka atao hoe raha misy vehivavy matanjaka manana ny maha izy azy dia misy lehilahy eo akaikiny eo. Fotoanan’ny fandraisana andraikitra eto amin’ny firenena izao hoy ny ministra Ihanta ka sikino foana ny hery hananantsika.
RANDRIAMANDRANTO IHANTA : TSY NY VALABE NO NAMPIRONGATRA NY HALATR’OMBY
Kabary Ihanta Randriamandranto, 03 Sept 11
Fanjakan’ny dahalo izao FAT izao hoy Raveloson Constant
Auteur Solo Razafy*Publié le 17 février 2013 Catégories Politique
12 pensées sur “RANDRIAMANDRANTO IHANTA : « FOTOANAN’NY FANDRAISANA ANDRAIKITRA ETO AMIN’NY FIRENENA IZAO »”
17 février 2013 à 10 h 05 min
Fa hatr’izay ry zareo fotoanan’ny inona ô ? Volana tantely ao an-trano falafa, sa inona ?
Nahoana ianareo no tsy nahavita niaro ny vadin’ny Filoha Ravalomanana sy ny vinanto-vaviny, teny Ivato fa dia navela nampijalian’ny mpanongana fotsiny ? Ianareo anefa ministra sy tsy haiko avy ? Tsy nisy sahy nitsangana sy niteny hoe tsy ara-dalàna izao ?
Tsy nisy fitoriana napetraka avy any aminareo mianakavy, fa faly nizesta naka sary teny fotsiny !
Atramin’izao mbola lotoin’ny olona foana ny Filoha Ravalomanana, dia tsy misy hetsika fanoherana an’izany mba hita mivaingana !
Naninona no tsy nihiaka raha vao hita fa tsy vonona ny hampihatra an’ilay tondrozotra ireo mpanongana ? Sa mbola feno sakafo tao am-bava, any ka matahotra ny ho kenda ?
Nahoana no navela ho potipotehan’ny sasany fotsiny, ny orin’asa TIKO ? Iza no mba niaro atramin’izay ka atramin’izao ?
Izao ê ! Na mbola miandry folo taona aza, ny Filoha Ravalomanana tsy maintsy tafaverina foana ; fa ny fantatry ny vahoaka amin’io andro io, dia tsy ianareo no nahatafaverin’azy mivady !!!
Fahotàna be ilay fanaovan-tsonia !
Nanome fetram-potoana ny UA, dia mody mivoaka daholo indray ?
17 février 2013 à 11 h 23 min
Eny hoa ry KM! ity minisitra tena anisan´ny nadiso fanatenana, fa vao nahaazo seza dia manao cinema sisa ataony.
Indrindra ity famaizany manondrana ny omby Malagasy , nefa ny Mlagasy efa ty homan-kena intsony ar tsy mahavidy hena, naninona raha nampidinina ny vidin-kena dia ny ministera manampy aminízany . Ntsssss!!!!!!
Izao miseho Magro indray fa hoe ho avy i DADA.
aleo tsy be resaka mamahan-dalitra rehefa tsy mahavita, f´angah vitan´ny fitazomana micro sy fanaovana tsidim-pahitra eny amin´ny Magro ny tolona, Ireo vahoka tonga isan´andro mitanin´andro efa ho 4 taona ireo no hobiana sy isaorana, ireo vahoaka ireo no tokony ahazo valisoa fa nitolona tokoa.
17 février 2013 à 17 h 42 min
« Fotoanan’ny fandraisana andraikitra eto amin’ny firenena izao hoy ny ministra Ihanta ka sikino foana ny hery hananantsika. »
Iza mba manana vaovao na saina lalina mba hazao hoe izay ahazahoanareo ity fehezan-teny ity ?
Fa nametrka ilay fe-potoana matsy ny CPS dia iny fa nivoka daholo indray ireo mpitarika niditra tao @ tetezamitan-drajoelina satria fantany fa raha tafaverina eo i Dada dia izy ireo no hilaza fa nahatonga izany.
– Aiza sy ahoana ireo gadra politika ? oh: Ny jly Raoelina, ny Kly Andianjafy ?
– Aiza ny MBS, Radio sy Televisiona ? ny Radio Fahazavana ? ny Radio Mada ? sy ny maro hafa koa..
– Aiza ireo sesitany politika? Dada , neny Ivohasina Yvan Rasandratriniony sns… ?
Ahoana no havela hitany ho vitsy an’isa ny mpanohanatra ao @ governemanta ? ao @ CT sy ny CST ?
– Nahoana no sakana tsy hidina an-dalambe ny olona fa avy hatrany dia herim-pamoretana ?
– Aiza ilay fampanantenana hoe, hiditra ao izahay ary tena hitolona ? Nisy vokany ve ? inona ilay vokany ?
– Aiza ilay fitoriana an’i Lylsion sy ny jly Ravalomanana ?
– Aiza ilay hetsim-bahoaka tsara karakara ?
Tena mbola lavabe fa izao. i Dada dia tangoroan’ny mpitaty rà-kena. Nefa anie ka raha mahavaly ny iray @ ireo fanotaniana ireo fotsiny ny mpitarika dia teny tonga ilay fitenenana hoe izay mitambatra vato e. Fa samy te hilaza @ i dada fotsiny hoe IZAHO ILAY NITOLONA..
Za moa ry Kintana sy Misajaona d’efa tsy nahavita niteny intsony; tena aleo dia tsy mihevitra azy ireo ho isan’ny zanak’i dada,fa diso fanantenana raha ireo no andrasana!
TSY AFAKA AHO HI-CRITIQUER OLONA – AMIKO TSY DIA TSARA LOATRA IZANY – HO HITA NY HO AVY – SAROTRA BE NY MANAO POLITIKA KA ALEOKO ANGAMBA MIANDRY SY MIVAVAKA HO AZY IREO REHEFA TSY MAHAVITA NA INONA NA INONA NY TENA.
Fa mba hono hoy aho ry Raozy ? Inona marina moa izany no tena mba « contributions » na hevitra entinao na tianao ampitaina amin’ny mpisera eto ?
Ny hoe, aza mikritika, na manenjika na ….., fa dia mivavàha maraina, antoandro sy hariva fa hoavy Andriamanitra hanavotra ny vahoaka malagasy ?
Hiandry folo taona, na zato taona ?
Ny vavaka araky ny voalazan’i LAZALAZAO, dia samy manao izay vitany any-pony any rahatoa ka ilaina izany ! Ny vahaolana tsy hisy rahatoa ka tsy mihetsika ! Ny hetsika tiako ho lazaina dia dia izay azo atao rehetra, rehefa hita fa tsy hanaraka an’izay NIFANARAHANA NY MPANONGANA !!
Ao antin’izany hetsika izany ny fitoriana any amin’ny Tribonaly ary raha tsy manao ny asany ny mpitsara malagasy, dia azo entina any amin’ny Tribonaly iraisam-pirenena ny Fitoriana !
Rehefa tsy hanatanteraka na hampihàtra ilay tozondrozotra koa ny mpanongana dia toriana amin’ny maha mpanongam-panjakàna azy !
Tondrozotra tsy aleany io koa, no vao maika hampidi-doza ny vahoaka sy ny Firenena !
Ho an’ilay ranamana ary !
I sarla efa nifoana tamin’ny vahoaka ary efa nilaza izy fa vonona ny hiatrika izay Fitsiràna tokony hitsar’azy !
Raha nilaza i Ramatoa Naika fa madio ny fony, anjaran’izy samy irery izany, fa ny fantatra dia olona mahitsy ilay ramatoa, ary manao izay tokony ataony, fa tsy toa an’iretsy be zesta iretsy !
Firaisan-kina no tadiavina, fa rahatoa ka olona hamingana ny tolona, tsy dia ilaina loatra na iza izy na iza !
Ho an’Ingahy Rakotoarivelo izay handalo Paris, tandremo fa ny rindrina aza manan-tsofina ! Mahaiza mamindra sy miresaka !
17 février 2013 à 20 h 47 min
Rehefa tsy nahitana hetsika mendrika ireo mitonona ho ankolafy Dada anefa nisisika ery hiara-hiasa @ bitro domelinaizay ambany fahefaan’ny frantsay dia ahoana ny hevitrareo raha:
– » Asaina manao grève de la faim ry zareo »: diso mandamandana loatra mantsy ary sao ho tata-zaitra ny akanjo na lobaka!!!!
17 février 2013 à 23 h 23 min
Mijoro! hevitra tsara sady mahaomby
aleo asaina hatomboka @’ Rakotoarivelo raha TENA MISY
IZANY FINIAVANY HAMPIHANTRA IO FR io, ary raha tena zanak’i dada ka VONONA MARINA NY
HIADY @ FAMPODIANA AZY, rehefa tsy izay dia tsy ho tafa e!!resa-be sisa.
17 février 2013 à 23 h 25 min
Tapoy ohatra an-dratsikirity koa raha vao mitapitapy izany
Rakotoarivelo handeha Pars izany zalah, ataovy mamay.
Mandehana aloha misasa ry mampjouir be â ! Maimbo loatra izato izy !
Fanehoan-kevitra no ataon’ny mpiaro ny ara-dalàna eto fa tsy inona akory ! Ny zavatra hainareo foza dia ny mamono olona ihany rehefa tsy mitovy fierehana sy fomba fisainana, satria tsy misy fiheritreretana ! Tsy misy ati-doha fa lohan’alika, lohan-drogony sy mpigoka !
Ho an’ny mpiaro ny ara-dalàna !
Nisy ny fanondranana omby mbola velona vao tsy ela, dia izao indray hoe hamidy amin’ny kiringy ny tanim-bary ! Ny ministry ny fambolena izay ao anatin’ny movansa Ravalomanana raha tsy diso ny tenako, dia tsy iza fa ny dadatoan’ilay mpamatsy vola an’i domelina tamin’ny fanonganana ! Dia ahoana indray izany ?
Ao anatin’ilay tondrozotra ve izany, sa dia inona indray ?
Marina ve io ? Izao ve no anisan’ny nihidirana tao amin’ilay systema ?
18 février 2013 à 10 h 41 min
Mety hisy » Gasy Style » ve hono ô?
Ny palestinien mba nanao ny azy fa efa adinony olona, ny « Harlem Style » mba hampilefak ny Gangnam Style…
Soa domelina no hanao tgv style mba hitohizany maha dj azy????
Ny tena tsara dia manampy tosika ny fisainan’i Danamona ka ndao ary isika hihetsika e!
19 février 2013 à 5 h 01 min
Ity ramatoa ity tokoa dia tsy hita intsony, ary Toa tsy manohana Ra8 izany izy fa légaliste fotsiny. Ny tena mahagaga dia izy tsy miraika mihitsy @ tolona, ary takona tanteraka. Maro ny milaza fa izao indrindra ilay ato hoe COLLABO. Angamba kosa izy mbola nijery izay mahamety ny holà-tendany.. Sa ilay sary no ………
Précédent Article précédent : Me HANITRA RAZAFIMANATSOA : TSY FANTARY RAJOELINA IZANY ATAO HOE » VIDIN’NY RENY » IZANY
Suivant Article suivant : NAIDITRA REANIMATION I BEBE RAZAY